किन हराए भाग्य न्यौपाने ? – Taja Khawar
किन हराए भाग्य न्यौपाने ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ समय: १:१५:२०
काठमाडौं । अग्लो कद झ्याम दारी पातलो शरीर अनि हल्का कालो बर्णका प्रियपात्र ।
पुर्बेली लबजमा क्या’मेरामा बोलेर लाखौको मनमा बसेका सयौलाई सहयोग गरेका व्यक्ति हुन् युटुबर भाग्य न्यौपाने ।
ताप्लेजुंग मा २०४९ सालमा जन्मिएका भाग्य न्यौपाने आफ्नो कर्मले लाखौको मनमा बसे हजारौलाई सहयोग गरे र धेरैको भाग्य बनाए ।
मलेसियामा पुगेका भाग्यलाई नेपा’ल मै फर्किएर केहि गर्ने आट जाग्यो अनि मलेसियाबाटै शुरु गरे तात्तातो खबर डट कम ।
तात्तातो खबर डट कममा उनले नेपाली समाचारहरु पोस्ट गर्ने थाले । अनि उनीले निधो गरे अब नेपाल फ़र्किएरै केहि गर्छु।
नेपाल आएपछि शुरुमा हास्यक’लाकार किरण केसीको अन्तरबार्ता लिएर तात्तातो खबर युटुब च्यानलमा सार्बजनिक गरे । त्यो भिडियो निकै भाइरल भयो ।
पत्रकारितामा कुनै अध्यन नगरेका भाग्य न्यौपानेलाइ यो क्षेत्रमा लागि रहन त्यहि भिडियो कोशे ढुंगा साबित भयो ।
युट्युबमा अन्तर्वार्ता लिए’र उनि सेलिब्रेटी नै बनेका छन । निरन्तर कर्म गर्दै गएका भाग्य न्यौपानेको भाग्य भने युट्युबले नै चम्काइदियो।
गाउँगाउँ पुगेर लिएका उनका अन्तर्वार्तालाई लाखौँ दर्शकले युट्युबमा हेर्ने गरेका छन् ।
समस्यामा परेका तर हाइ’लाइटमा नपरेका समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने भाग्यले युट्यबकै लागि भनेर रातदिन समय दिइरहे ।केही वर्षयता नाम र दाम दुवै भाग्य पछिल्लो समय समाजसेवामा पनि जोडिए । जसकारण भाग्यका फ्यान दिनानुदिन बढ्दै गए ।
झापा पुगेर उनले अहिलेका बालxगायक अशोक दर्जीको अन्ततर्वार्ता लिएका थिए । त्यसपछि अशोक दर्जी पनि एकाएक चर्चामा आए । भाग्य न्यौपानेले ल्याएका धेरै भिडियो अन्तार्वार्ता चर्चित बने ।
भाग्यले अन्तर्वार्ता ल्या”उन शुरु गर्दा यस्ता विषयवस्तु मिडियाको नजरमा पुग्दैनथे । ‘भुइँचालो जाँदा होस् या अरु बेला मैले त्यस्तै समाजमा पछि परेका कथालाई पात्र बनाए, कतिले त अन्त’र्वार्ताकै कारण सहयोग पनि पाए ।अहिले त भाग्य न्यौपानेले जस्तो नयाँ पात्र र विषयको खोजी गरेर अन्तर्वार्ता लिने चलन नै बसेको छ ।
उनले कति बिरामीलाई भेटेर आफूले सहयोग गरेको र कतिको लागि सहयोग जुटाए । अहि’ले चर्चित बनेका अशोक दर्जीको अन्तर्वार्ता लिन उनी झापाका विभिन्न स्थानमा पुगेका थिए । निरन्तर रुपमा सक्रिय भएर समाजका प्रतिभाको खोजी गरिरहेका भाग्य न्यौपाने अहिले गुमनाम छन् ।
कोइ बिरामी परे होस् चा’हे कोइ खान नपाए होस् उनि सहयोग लिएर पुग्थे ।कतै नया प्रतिभा भेटीए क्यामेरा लिएर पुगी हाल्थे ।तर केहि महिना यता भाग्य कहिँ कतै देखिएका छैनन् ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जा’लहरुमा कुनै पोस्ट गरेका छैन् । युटुब च्यानलमा निरन्तर भिडियो पोस्ट गर्दै आएका भाग्य न्यौपानेले आफुले चलाउदै आएका ततातो खबर, भाग्य न्यौपाने युटुब च्यानलमा कुनै भिडियो पोस्ट गरेका छैनन् ।
तातो खबरमा त तीन महिनादेखि नै कुनै भिडियो पोष्ट छैन । भाग्य न्यौपाने युटुब च्यानलमा ७ महिनादेखि भिडियो राखेका छैनन् ।
उनको निगरानीमा चलाइएको भनिएको सोसियल न्युज नेपालमा भने समाचार वाचन गरेर निरन्तर भिडियोहरु आइरहेका थिए । त्यसमा समेत एक महिनादेखि कुनै भिडियो छैनन् । झण्डै साढे ५ लाख फलोअर्स रहेको फेसबुक अकाउण्टबाट समेत उनले कुनै पोष्ट नगरेको एक महिना भएको छ । उनी कतै पक्रा’उ त परेनन् भन्ने शं’का छ ।
लाखौको मनमा बसेका हजारौलाई सहयोग गरेका भाग्य न्यौपाने विजय शाहीको भिडियो सार्बजनिक गरेपछी भने केहि बिबादित बनेका थिए ।’
त्यस्तो नेपालका चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले पनि मेमोरी किङ्ग भने चिनिने विजय शाहीको अन्तर्वार्ता लिएका थिए । उनी भाग्य न्यौपाने कहाँ हराए । अहिले सबैको खोजीको विषय बनेको छ ।
Last Updated on: August 2nd, 2021 at 1:15 am